FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SOEDOÀ SOEDOÀ - ALIKA
Alika tantsaha danoà-soedoà Tjalfe sy Sigurd (samy lahy) - 'Sigurd mankafy ny fandriana sy lamba firakotra. Tjalfe dia variana amin'ny baolina, tsorakazo, vato, izay rehetra azony atsipy anao. Hanao izay rehetra hitany izy ary hamerina azy ho anao manipy azy indray. Tontolo andro. Telo taona i Sigurd ary efa ho telo taona i Tjalfe fony nalaina ity sary ity. '
Fanamarihana: Tjalfe sy Sigurd dia alika mpiompy Danoa-Soedoà, na izany aza tsy manao ny fenitra araky ny nosoratan'ny klioban'ny karazany ary tsy manana taratasin'ny klioba.
Alika fiompiana danoà / soedoà
ANJOMA FANJAKANA DANISH / SWEDISH
dey-nish swee-plate fahrm dawg
Diso matetika ho an'i Jack Russell na Fox Terrier, ny Dog Farm Danoa-Soedoà manana palitao malama sy fohy, mafy, akaiky mandainga, izay voalaza fa tsy misy fofona. Kely izy ary mifintina, ary saika mahitsizoro ny fananganana manana tratra lalina sy malalaka rehefa mandroso tanteraka (izay maharitra 3 taona). Kely ny loha, misy telozoro, misy karan-doha somary boribory somary boribory ary fijanonana manasongadina tsara izay taper amin'ny tendrony farany amin'ny orona, tsy misy fijery maranitra sy snipey. Ny fijanonana manasongadina tsara sy ny endrika telozoro amin'ny loha no mampiavaka azy amin'ny Fox Terrier. Mahery ny valanoranony. Mipetaka mankany aloha ny sofina, na miendrika raozy. Ny rambony dia lava na voajanahary bob-tail, tsy tafapetraka mihitsy. Ny bobtail voajanahary dia mety hitranga raha manana bobtail ny iray na ny ray aman-dreny. Ny bobtail voajanahary dia mety ho lava kokoa noho ny rambony feno habe. Tsy ara-dalàna ny docking any amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana. Ny loko palitao dia misy fotsy miaraka amin'ny volontany sôkôla sy / na mainty mena / mena, na tricolor na bicolor.
Ny alika toeram-pambolena soedoà danoà dia karazany miasa, mailo, velona ary manan-tsaina. Tia fiheverana izy io ary mamy sy sariaka. Liana sy feno toetra, tsara miaraka amin'ny ankizy, manao alika fianakaviana tsara. Vonona hilalao foana. Amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny alika hafa, fa tsy azo atokisana amin'ny biby toy ny kisoa ginea , hamsters na vorona biby . Hanondro sy handoka vorona izy ireo. Haingam-pandeha sy mailamailaka, manao raty sy mouser tsara izy ireo, ary manana toe-tsaina mandavaka. Mora voaofana dia mianatra haingana izy ireo. mpitarika , FANAZARAN-TENA SY Training dia zava-dehibe ary tokony hanomboka raha mbola alika kely ny alika. Izy ireo dia manana fahaizana hahay tetika isan-karazany ary mahay mankatò avo sy karazana fanatanjahan-tena alika. Nampiasaina tamin'ny fanaovana «circus» mihitsy aza izy ireo. Alika mpiandry omby lehibe, hiompy biby goavambe tsy misy tahotra izy ireo. Tsy yapper, tsy mirona fotsiny izy ireo rehefa ilaina, ka manao watchdog tsara. Canine mety amin'ny serasera alika avy amin'ny tompona mampiseho a fahefana voajanahary tena ilaina.
Haavony: Lehilahy 12 - 14 santimetatra (32 - 37 cm)
Lanja: 15 - 25 pounds (7 - 12 kg)
Ny Dog Farm Farm soedoà dia hanao OK amin'ny trano iray raha mbola ampiasaina tsara. Ho tsara indrindra raha manana tokotanin-trano mimanda izy ireo, fa na manao ahoana na manao ahoana ny velarantaninao, dia mbola mila mitondra azy mitsangatsangana sy manome hetsika hafa isan'andro ianao.
Mila fanatanjahan-tena betsaka ny Farmdog Danoa-Soedoà. Farafahakeliny adiny iray isan'andro amin'ny karazana hetsika iray miaraka amin'ny a mandeha isan'andro na mihazakazaka amin'ny toerana anaovan'ny alika ny ombelahin-tongony na eo ambadiky ny olombelona mitazona ny firaka. Tsy eo anoloana mihitsy toy ny voajanahary milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana , ary ny mpitondra dia tokony ho ny olombelona. Ity karazana ity dia nompiana ho alika miasa, ary hanao ny tsara indrindra ary ho sambatra indrindra amin'ny karazana asa tokony hatao na karazana lalao iray miaraka amin'ny tompony. Ajanony any amin'ny faritra tsy azo antoka izy ireo, satria mety hanapa-kevitra hanenjika hafa izy ireo biby kely toy ny a bitro , squirrel na saka aza hitany lavitra.
Manodidina ny 10 -15 taona
Ankizy 4 ka hatramin'ny 5 eo ho eo
Ny Dog Farm Farm Danoa-Soedoà dia mora taovolo. Fohy ny palitao ary tsy mitaky borosy isan'andro. Mandroa rehefa ilaina. Ity karazana ity dia mandoaka kely mandritra ny taona miaraka amin'ny fandatsana mavesatra vanim-potoana. Ny fikosehana amin'ny borosy vita amin'ny fingotra hanalana volo volo dia afaka mampihena ny fandatsahana sasany.
Karazana tranainy iray efa antitra, ny tantaran'ny Dog Dog Farm Danoa-Soeda dia nanomboka tamin'ny taona 1700, angamba hatramin'ny arivo taona lasa. Ilay alika dia nantsoina taloha hoe Terery Fox Terrier taloha na Scanian Terrier, na dia heverina ho mpitifitra fa tsy tertera aza izy io ankehitriny. Ary koa, matetika dia nantsoina tsotra hoe The Rat Dog. Avy any Danemarka sy Suède izy io, ary tsy fahita firy ao Etazonia. Alika miasa any amin'ny toeram-piompiana marobe izay nanao na inona na inona nanomboka ny totozy sy ny voalavo, ny fiompiana ny omby hatao ronono, ny alika mpiara-miasa ho an'ny fianakaviana. Nalaza ihany koa izy io toy ny alika boribory. Ampiasaina be amin'ny toeram-pambolena any ambanivohitr'i Danemarka, Schleswig-Holstein ary Scania. Rehefa natambatra ho an'ny tarika lehibe kokoa ho an'ny fambolena midadasika ny toeram-piompiana ary ny tantsaha an'arivony dia lasa mpiasa indostrialy, ny isan'ny alika miasa io dia nihena be mandra-pahatongany lany tamingana . Hatramin'ny faramparan'ny taona 1980 dia tsy nisy fenitra. Ny alika fotsy sy mainty / mety ho amboletra rehetra any ambanivohitra dia alika fiompy avokoa. Raha ny alikan'olon-kafa dia mahay misambotra voalavo ary ny alikan'ny mpifanila trano aminy dia nanana fahatezerana mafy dia namela ireo alika roa hiaraka izy ireo ary hanana alika fiompiana bebe kokoa. Ny Danesianina sy ny Kennel Clubs avy any Suède dia nanao ezaka nitady ny alika sisa tavela, nametraka fenitra an-tsoratra ary hamonjy ilay karazany taloha tsy ho lany tamingana. Ny karazany 'vaovao' dia nambaran'ny klioba kennel roa ary ny anarany ofisialy lasa Dog Dog Farm Danoa-Soeda. Tamin'ny taona 1987. Alika maro no tsy nopetahana taratasy tamin'ny alika fiompiana alika ary tsy nanao ny fenitra, fa mbola alika Danoa-Soeda Farm ihany satria tsy misy anarana hafa ho azy ireo. Danemarka sy Suède dia mihevitra ny alika fiompiana ho karazana miasa. Na izany aza, dia alika mpiara-miasa ao Etazonia matetika. Napetraka ao amin'ny 'FCI Group 2 - alika miasa tsy misy fitsapana' ny klioban'ny Kenyaney sy ny Kennel Club. Miandry ny fankatoavana farany an'ny FCI.
NAOTY: Tsy tokony hafangaro amin'ny Farmdog Danoa-Soedoà ny Alika Akoho Danoa . Ny Farmdog Danoa-Soedoà sy ny Alika Akoho Danoa Taloha dia karazany roa samy hafa tanteraka. Navoaka tamin'ny fomba diso tao amin'ny Encyclopedia an'i Bruce Fogle momba ilay alika fa ny Dog Dog dia tsy fantatra amin'ny hoe Dog Dog. Ity boky ity dia manana Farmdog Danoa-Soedoà voatanisa eo ambanin'ny anarana hoe Old Chicken Chicken Dog ary manana ny Old Dog Chicken Dog antsoina hoe Old Dan Pointer. Ao amin'ny tontolo Danoa, tsy misy fisafotofotoana, ny fisavoritahana misy eo amin'ireo tsy miteny Danoa fotsiny. Matetika ny tranonkala dia miteraka fisavoritahana (ao anatin'izany ny mpiompy), saingy tsy mitranga amin'ny tranokala Danoa izany. Ny antony maha-Encyclopedia an'i alika an'i Bruce Fogle no hany boky fiompiana alika amin'ny teny anglisy izay manana ny Farmdog Danoà-Suède hita sary sy fariparitra, fa voatanisa ho alika akoho Danoa. Nahatonga ny fisafotofotoana teo amin'ny tontolo miteny anglisy (sy mamaky) ity. Fifangaroana iray hafa izay misy momba ny firazanany. Ny Farm Dog indraindray dia sokajiana ho Terrier, satria toa Fox Fox, toa ny an'ny alika Pinscher. Danoa: gaardhund (gårdhund) - Gaard dia midika fiompiana - Hund midika hoe alika.
Etazonia: Alika mpanaradia - Danemarka / Soeda: Vondrona 2, Alika miasa tsy misy fitsapana
NA = Fikambananan'ny Amerikanina mahalana
DSFCA = klioba Farmdog Danoà / soedoà any Amerika
NKU = Vondrona Kennel Nordic
Sigurd mpiompy omby danozianina-soedoà mpiandry omby.
Sigurd ilay alika Farm Danoa-Soedoà lahy amin'ny 3 taona
Sigurd sy Tjalfe ny Farmdogs Danoà-Soedoà
Tjalfe ilay Farmdog Danoa-Soedoà
Tjalfe ilay Farmdog dano-soedoà 15 volana dia mandeha amin'ny tompony na aiza na aiza. Amin'ity tranga ity amin'ny fitsidihan'ny mpianakavy dia mandry eo ambanin'ny fitaratra-drivotra ao amin'ny vanin'ny Peugeot reniko izy.
boston terrier lab mifangaro toetra
asehoy ahy ny sarin'ny faribohitra sisintany
fifangaroana dachshund / terrier mifangaro volo
shar pei pit mix mix alika kely